काठमाडौं – एक नेपाली युवाले वृद्ध जापानी महिलालाई लाखौं ठगिनबाट बचाएका छन् । एक स्टोरमा क्लर्कको रुपमा कार्यरत ती नेपालीले वृद्ध महिलालाई इन्टरनेट फ्रडमा ठगिनबाट जोगाएकोमा फुकुशिमा पुलिसले उनलाई प्रशंशा पत्रले सम्मानित गरेको छ ।फुकुशिमा पुलिस स्टेशनलाई उद्धृत गर्दै एसिया वनले जनाएअनुसार ती वृद्ध महिला ती नेपालीले काम गर्ने स्टोरमा डेढ लाख जापानी येन (१ लाख ६५ हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबरको विद्युतीय मुद्रा किन्न आएकी थिइन् । जनवरी १८ को दिन बेलुका आएकी ती महिलाको कुरा सुनेपछि ती नेपाली क्लर्क सशंकित भएका थिए ।
बजारमा नयाँ टिसर्ट सार्वजनिक !
पाथीभरा क्षेत्रमा लागेको डढेलो ४ दिनसम्म पनि नियन्त्रण बाहिर !
एक करोड खर्चमा इन्जिनियर लगाएर बनाइएको ‘नाचघर’ !